IGBU ICHI N'ALA IGBO | Igboniile
Onye ọbụla chọrọ igbu ichi ga-emerịrị emume nye arụsị tupu ọ gawa n’ihu. Nke a bụ maka nkwado mmụọ ala ha nke obodo ahụ kwenyere na ọ bụ chi ha. Mgbe a na-egbu ichi, ndị Igwe, Onowu, Nze na Ọzọ, ma Ichie ga-anọrịrị. N’ala Igbo, o nwere obodo ndị na-egbu ichi dịka Nnanka, Ụmụowere nke dị na Agulu, Agukwu Nri, Ụmụdiọka wdz. Obodo ndị a dịcha na steet Anambra.
Igbu ichi enweghị ihe ọzọ karịa iweta mma maọbụ agụba kawacha mmadụ ihu. Nke a na-abụkarị n’egedege ihu. E nwere ike kawara ya ruo n’akụkụ anya onye ahụ. Mgbe a na-egbu ichi, a ga-enwe onye ga na-atakwasị onye a na-egbu ichi mmiri. Onye ọ bụla ga-egbu ichi ga-anọ n’akwa ọzọ ihe dịka izu asaa. Mgbe nke a gachara, onye ahụ ga-agbanye ọmụ n’ọkpa. Onye gburu ichi nwere ike ị nọ n’akwa ọzọ nwụọ. Onye ụjọ enweghị ike igbu ichi, kama a kaa ya mma maọbụ agụba negedege ihu, o were mezie mmemme dị na ya. Onye ọbụla gburu ichi na-eme nnukwu emume n’ụlọ ya, ma sikwa nri iji kpọkuo ndị mmadụ gwa ha na ya chiri nnukwu echichi. Obi ga-abụ onye ahụ sọ ụtọ. A na-esi ọtụtụ nri dịka osikapa, akpụ, ji mmiri ọkụ wdz. Onye a na-egbu ichi ga-amacha akwụkwọ unere n’ala. Onye ahụ ga-edila aba n’elu akwụkwọ unere ahụ, e wee na-egbu ya ichi. Ụmụ nwanyị enweghị ikikere igbu ichi. Ọ bụ naanị ụmụ nwoke na-egbu ichi. Onye e gburu ichi ga-anọ izu asaa n’akwa ka “ọnya” si n’ichi e gburu ya were kpọọ. Onye ọbụla a ga-egbu ichi ga-ebugodu amanwụrụ. Mgbe ahụ o buru amanwụrụ, ọ ga-apụ ahịa; a ga na-akụkwara onye ahụ egwu.
Gụọ maka amanwụrụ n’ebe ọzọ na websaịtị a.
URU DỊ NIGBU ICHI
1.	Igbu ichi na-enye mmadu ugwu na nsọpụrụ
2.	Ọ na-egosi onye ukwu.
3.	Igbu ichi na-egosi onye bara ụba n’obodo.
4.	Ọ na-egosi onye obi kara
ỌGHỌM DỊ N’IGBU ICHI
1.	Ọ na-emepụ ọtụtụ ọbara n’ahụ onye ahụ mgbe ọ na-egbu ichi.
2.	A na-emefu ọtụtụ ego mgbe a na-egbu ichi.
3.	Ogbenye adịghị egbu ichi.
4.	Ọ na-emebi ihu.
5.	Igbu ichi na-eweta ngala.
6.	O nwere ike iwetara mmadu ọnwụ n’ihi ụfụ.